नेपालमा बढ्यो ल’कडाउन, तर लकडाउन स्वरुप यस्तो ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा बढ्यो ल’कडाउन, तर लकडाउन स्वरुप यस्तो !
काठमाडौँ / सरकारले देशव्यापी रूपमा लगाएको लक’डाउन जेठ महिनाको अन्तिमसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। भाइरसबाट स’ङ्क्रमितको स’ङ्ख्या एकै दिन करिब दुई सय बढेको दिन शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
तर लकडाउन केही खुकुलो बनाउने सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। उनले भने, “लक’डाउनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कोरोना रोकथाम तथा नि’यन्त्रण समन्वय समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्ने छ।
लकडाउन सबै क्षेत्रमा एउटै हुनसक्छ भन्ने होइन। अवस्था अनुसार केही फरक हुनसक्छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन रोक्ने अवधि असार १६ गतेसम्मको निम्ति बढाइएको छ। उनले भने, “सङ्क्रमणको जो’खिम सीमापारीबाट पनि बढेकाले सम्पूर्ण आवागमनमा थप कडा’इ गर्ने र सीमा वारपार गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार जाँच गरेर मात्र लग्ने वा ल्याउने विषयमा छिमेकी मुलुकसँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ।”
शनिवार बसेको सुरक्षापरिषद्को बैठकले पनि सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रीमान मा@रेको आरोप लागेकी श्रीमती प्रमिलालाइ प्रहरिले छोड्यो प्रमिलाको माइतिमा पुग्दा दिदिले यस्तो भने (हेर्नुहोस भिडियो)